Mkpado: nyocha nyocha | Martech Zone
Nyocha: nyocha ndị dị n'ịntanetị
ActiveTrail: Easyzọ Dị mfe iji Eji Email na Ahịa akpaaka Platform
Friday, December 29, 2017 Mọnde, Jenụwarị 1, 2018 Douglas Karr
Nwere alaka dị na USA, Israel, Germany, France na Latin America, ActiveTrail na-enyere azụmaahịa nke ụdị na ogo niile, gafee ụwa aka ịzụlite mmekọrịta ha na ndị ahịa ha. Ebe ọ bụ na ịmalite dị ka ọrụ n'ime, ụlọ ọrụ ahụ abụrụla onye na-eweta ọrụ, ọtụtụ ndị na-eweta ọrụ email, na-enye usoro mgbasa ozi dị elu. ActiveTrail Email Marketing Platform Atụmatụ Gụnyere Email Marketing - Na-ewu ngwa ngwa na-ewuli mgbasa ozi email na-akpali akpali. Ha bụ ngwa ọrụ zuru oke gụnyere ihe ndị na-akpali akpali, njikwa kọntaktị, onye ndezi ihe oyiyi, ụbọchị ọmụmụ
SimplyCast: Platform Nkwukọrịta Ndị Ahịa
Monday, April 7, 2014 Wenezdee, Jenụwarị 21, 2015 Douglas Karr
SimplyCast 360 Automation Manager jikọtara ntinye ọwa 15 n'ime otu ikpo okwu, na-enyere ndị marekters aka iwulite mkpọsa ahịa akpaka na nkwukọrịta. Ihe ngwọta ha na-enye gị ohere iru ndị ziri ezi n’oge kwesịrị ekwesị site na usoro nkwukọrịta kachasị amasị ha. Soro ndị ahịa na atụmanya dabere na data echekwara, ọdịmma ha, na mmekọrịta ha gara aga na nzukọ gị iji mee ka nloghachi gị na itinye ego. Ngwọta akpaaka ahịa SimplyCast na-enye gị ohere ịtọ
UserZoom na-enye igwe ojii nke dabeere na igwe ojii, nyocha niile nke ihe eji arụ ọrụ n'ịntanetị maka ụlọ ọrụ iji nwalee arụmọrụ n'ụzọ dị irè, tụọ olu ndị ahịa ma nyefee nnukwu ahụmịhe ndị ahịa. UserZoom na-enye ikike nyocha maka desktọọpụ, gụnyere nnwale iji arụ ọrụ dịpụrụ adịpụ, nhazi usoro, nyocha osisi, nyocha ihuenyo nseta ihuenyo, nyocha oge nyocha oge nyocha, nyocha ntanetị, VOC (Nyocha nyocha), VOC (Nzaghachi Nzaghachi) yana nnwale ojiji mkpanaka na ngwa mkpanaka. VOIC (Ntinye). Nnyocha ahụ na-arụpụta data eji eme ihe, nzaghachi nyocha,
Wzọ 3 iji jiri nyocha maka nyocha ahịa kacha mma
Mọnde, Febụwarị 13, 2012 Sunday, October 4, 2015 Hanna Johnson
Ohere inweta bụ na ọ bụrụ na ị na-agụ Martech Zone, ị maraworị otu mkpa isi nyocha ahịa dị mkpa na atụmatụ azụmaahịa ọ bụla. N'ime ebe a na SurveyMonkey, anyị kwenyere na ịmara nke ọma mgbe ị na-eme mkpebi bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ime maka azụmaahịa gị (yana ndụ onwe gị, kwa!). Nyocha ndị dị n'ịntanetị bụ ụzọ dị mma iji mee nyocha ahịa ngwa ngwa, ngwa ngwa, na ọnụ ahịa nke ọma. Lee ụzọ 3 ị nwere ike isi tinye ha n'ọrụ gị